DZINONGOITIKA Ve NYANZVI
Ningbo Dahongying Bioengineering Co., Ltd. (Est.1998) riri mu Ningbo - zvoupfumi muzinda kumaodzanyemba the yangtze River Delta. Vachinzi dzisisngaoni Ningbo Port kumabvazuva, uye rine nenzvimbo zvinobatsira sezvo kusangana Shanghai kuchamhembe. The Company iri mutema uye zvakatipoteredza ushamwari zvebhizimisi munyika ounyanzvi hwokushandura zvinhu zvipenyu indasitiri, uye akanga paakavapa mazita akawanda mumakore achangodarika, yakanga aivawo mibayiro yakawanda muminda okuzvibatsira utsanzi, simba okuponesa, kudzivirirwa kwezvakatipoteredza uye voruzhinji nerudo.
The Company iri tanga mugadziri of Natural Ve muna China, uye rave kushandisa pagadzirwe Natural Ve kwemakumi emakore makore. Chinotaura ayo pfungwa zvokudya hwakanaka achitungamirira unyanzvi uye unhu hupi kuti vatengi pose. Kubvira pakagadzwa, kuti Company rwakanamatira utariri nokusimbaradza uye mashandiro utsanzi. Inobva utariri pfungwa Human Based, kuti Company akagadza kurira unhu vimbiso gadziriro hunovimbisa unhu yakakwirira zvigadzirwa.
Kunyange Company yave akaziva nhoroondo inobwinya, pachine refu nzira kuenda mune ramangwana. Chete michina yemhando yepamusoro uye akapfuma utariri ruzivo, pamwe womudzimu kuchiitwa "Green, Healthy uye Vanofara", tinogona kubudirira chinangwa remakore-kare zvebhizimisi uye nyika-nomukurumbira muchiso. Tinotenda kuti, kubudikidza nesimba redu, Dahongying richava kumuka nyeredzi Natural Ve.
Kana uchifarira zvinhu zvedu kana kuva chero mibvunzo, tapota inzwa wakasununguka nesu. Tinotarisira kuti asimbise pamwe ukama newe munguva yemberi iri pedyo.